विचित्र संसार Archives - Page3of 19 - Nepal News, News from Nepal, Online News from Nepal, Nepali News, Political, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Credit, Vehicle, Bank, Entertainment, Nepali Movie, Songs, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, Nepali Filmi News, Poems, Business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale
अवैध याैन सम्बन्धले लियो २५ वर्षीया युवती मेनकाको ज्यान
धनगढी-विवाह गर्ने प्रलोभन देखाई राखिएको अवैध शारीरिक सम्बन्धपछि रहेको गर्भका कारण नै यहाँ एक युवतीले आत्महत्या गर्नुपरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।स्थानीय आसिस मोबाइल ग्यालरी पसलमा काम गर्दै आएकी २५ वर्षीया मेनकाकुमारी चौधरीलाई पसल सञ्चालक धनगढीका तोहित सिद्दकीले विवाह गर्ने प्रलोभन दिई गरेको अवैध शारीरिक सम्बन्धपछि रहेको गर्भलाई पतन गराउन औषधि खान लगाएका कारण मेनकाले…..
बिहे गरेर छोराछोरी जन्माइसकेपछि ती श्रीमानलाई छोडेर उनकै साख्खै भाइसँग बिहे गर्नु त्यो पनि श्रीमानसहित पूरै परिवारकै सहमतिमा । यस्तो कुरा निकै अपत्यारिलो लाग्छ । तर भारतको बिहार राज्यको भागलपुरमा यस्तै विचित्र घटना भएको छ । यहाँको एक परिवारमा भाउजुको देवरसँग प्रेम भएपछि परिवार विभाजित हुनबाट बचाउन दाजुलै नै देवरभाउजुको विवाह गरिदिएका छन् । बिहेपछि…..
भनिन्छ, जव प्रहरीले डण्डा चलाउँछ, लाटो मानिस पनि बोल्न थाल्छ। तर प्रहरीको डरले भित्ता पनि बोल्न थाल्यो भने…! सुन्दा यो कुरा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ। तर तपाइँ यो समाचार पढ्दै जाँदा वास्तविकता आफैं खुल्दै जाने छ। त्यसो त हामीले घर, पसल वा ठूलो महलको भित्तोभित्र करोडौंका खजाना भेटिएको समाचार सुन्दै आएका छौं। तर यस्तै एउटा विषयमा…..
१९ वर्षीया मोडलद्वारा आफ्नो कुमारित्व १९ करोडमा बिक्री
१९ वर्षीया अमेरिकी मोडल गिसेलले आफ्नो इच्छा र पढाइ पूरा गर्न भन्दै सबैलाई चकित पार्ने कदम उठाएकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमका अनुसार १९ वर्षीया ती मोडलले आफूलाई नै लिलाम गरेकी छन्। त्यसो त कानुनी रुपमा लिलामी सम्पत्तिलाई मात्र लिएर हुन्छ, वा कुनै बहुमूल्य चिजको लिलामी हुन्छ। तर यो पटक भने मोडलले लिलामीको परिभाषा नै परिवर्तन गर्दै…..
Page3of 1 « Previous 12345 … 19 Next »